1. Kwenzenjani? Akukaze kuhloswe ukuza Ukuza isikhathi eside ngaphambi kokululama Mhlawumbe kuze kube seqophelweni lokucasuka, ukucasuka, ukungakwazi ukwenza lutho. Abantu abaningi kungenzeka babhekane nenkinga yama-hiccups. Lokho kwesinye isikhathi kuza ngezikhathi ezingafanele ukufana Ukuba semhlanganweni Noma ukuxoxa ngemicimbi ebalulekile Noma kumcimbi lapho kuzalwa khona uKaiwa Ukucabanga ngakho, bekukhungathekisa, kugona inhliziyo yakhe ngolaka. Kepha ungesabi Namuhla sesiyazi ukuthi ungasusa kanjani ama-hiccups. Lokho sihlangene ukukutshela ukuthi ugweme ukukhathazeka Lapho lesi sibonakaliso sibuya
2. Yazi izimbangela ze-hiccups ngaphambi kokuthi wazi ukuthi ungayisusa kanjani i-hiccups yakho. Kumele kube khona imbangela. Noma ngubani owenza okungahle akwazi ukunakekela futhi avimbele lolu phawu olucasulayo? I-Hiccup ibangelwa yisimo sokuphambana okungazelelwe emisipheni yediyaphragm etholakala phakathi kwesifuba nesisu. Ngenxa yokuncipha Umphumela wokuhogela ngokushesha Kodwa ngasikhathi sinye, umoya ongenayo ubhajwe yizintambo zezwi ezivaleka ngokuzumayo. Kusukela ekunciphiseni kwemisipha ye-laryngeal Kubangela umsindo we-hiccup osenza sikhungatheke Kungenzeka isikhathi esifushane bese kunyamalala, noma kokunye kungathatha amahora angaphezu kwama-48. Umsuka ungabangelwa ukubhema ngokweqile. Ukuphuza ngokweqile Yidla ukudla ngokushesha, musa ukukuhlafuna kahle noma udle okubabayo, ukuqumba. Kungabangelwa futhi yimizwa ekhungathekile noma ukushintsha okungazelelwe kokushisa okubangela ukuthi umzimba uguqule ngokuzumayo.
3. Izindlela ezi-5 zokususa ama-hiccups Futhi akuthinti umzimba Noma ngubani o hiccups kaningi Namuhla sithola indlela ephephile futhi elula. Okubaluleke kakhulu, akuthinti umzimba ukuthi ushiye omunye nomunye.
4. Thatha isiphuzo samanzi abandayo noma ugaxe ngamanzi abandayo. Lokhu kuzokuvumela ukuthi uphefumule ngokwengeziwe ngokuphuza inkomishi enkulu yamanzi abandayo, futhi amanzi azosiza nemisipha evimba ukuphefumula kwakho ivuleke futhi uphumule, kodwa kancane uphuze futhi ubambe umoya wakho ngemuva kokuphumula. Kusebusuku ukugwema ukuminyana.
5. Bamba umoya wakho isikhathi esifushane ngokubala uye eshumini kancane.Lokhu kuyefana nendlela yokuqala. Ngemuva kokubamba umoya wakho Sizokwazi ukuphefumula ngokugcwele. Kungasiza ekunciphiseni izimpawu zobusuku.
6. Yidla ukudla okumuncu, okunoshukela njengocezu lukalamula noma ibhulokhi likashukela Le ngenye indlela yokusiza izinzwa zakho zihlale ziphapheme. Kusukela ekunambithekeni kokudla Ngaphandle kokubanga noma yimuphi umonakalo
7. Mema umngani ukuthi abangele ukushaqeka Lapho kwenzeka okushaqisayo, umzimba uphefumula ngokushesha. Futhi imisipha isuka ekuthuseni okusheshayo
8. Ukuhogela noma ukudala izimpawu zokuthimula Lokhu kusivumela ukuthi siphefumule kanzima futhi ukuthimula kusiza imisipha yesivimbo nomoya womoya ukuthi usetshenziswe.
9. Uma izinyathelo ezibalulwe ngenhla zingalahlekile Futhi ama-hiccups aqhubeke amahora angaphezu kwama-48, kuzodingeka abonane nodokotela ukuze athole umuthi nokwelashwa ukuthola imbangela Njengoba ngishilo, zonke izimpawu zinomsuka wazo. Futhi ukuba hiccup isikhathi eside, njengomzimba, kuthumela izimpawu zokuxwayisa ukuthi kufanele siqiniseke ukubheka ukuphepha.